YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, March 31
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ခွေးဋီကာနှင့်ပင် ပထမရွေးလမ်းသမားတို့အတွက်က ပြည့်စုံ၍နေပြီ၊
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နအဖ မှ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများအား ထုတ်ပြန်လိုက်၏။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်အား သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း မရှိသေးသော်လည်း… ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရက်မှာမူ… နီးကပ်လာပြီဟု ယူဆရ၏။
ဤတွင်…. ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာပြီး… ရွေးလမ်းများ ကွဲလာကြ၏။
ပထမရွေးလမ်းက … ခြွင်းချက်မရှိ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသို့ ဝင်မည်။ ဤသည်တို့ကား…. စစ်အုပ်စုမှ ဖွဲ့စည်းပေးမည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်၏။ စစ်အုပ်စုနှင့် အရောင်တူ၊ အသွေးတူ၊ အတောင်တူ….တို့ ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ကြမည့် စွမ်းအားရှင်များဖြစ်၏။
ဒုတိယရွေးလမ်းက …. ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသို့ ခြွင်းချက်နှင့် ဝင်မည်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ပါလီမန်အတွင်းမှ တရွေ့ရွေ့နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်၊ ယနေ့အခြေအနေ၌ အခြားရွေးလမ်းမရှိ၊ စစ်အုပ်စုမှ ဖွင့်ပေးသည့် ဒီမိုကရေစီဝန်းကျင်သည်… ကျဉ်း၍ ငယ်ကောင်းငယ်မည်… သို့သော် …ကျဉ်းသော… ငယ်သော ဒီမိုကရေစီဝန်းကျင်ကိုပင် တဖြည်းဖြည်း ချဲ့၍သွားရမည်၊ စစ်အုပ်စုမှ ‘ဟ’ ပေးသည့် space အား တစတစနှင့် ချဲ့ယူရမည်။ ဤသို့… ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးသို့ သွားရာလမ်းက …. ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပါလီမန်တွင်သာ ရှိ၏။ ဤအတွက် …ရွေးကောက်ပွဲသို့ ဝင်ရမည်ဟူ၍ ခြွင်းချက်ပေး၍ စိတ်ကူးယဉ်ကြ၏။ အီဗော်လူးရှင်း (evaluation) သမားများ….။
တတိယရွေးလမ်းက …. ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်ကား… ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံဟူသည်က …ပြည်သူအား ကိုယ်စားမပြု… ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါ။ စစ်အုပ်စုမှ စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် ရေးဆွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရမရှိ….။ ဤအတွက် …ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်၏။ သပိတ်မှောက်၏။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဆက်၍ တိုက်ပွဲဝင်ရမည်… ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ပထမရွေးလမ်းဟူသည်က…. စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို့ ဦးတည်ရာဖြစ်၍ လူထုလျှောက်မည့် လမ်းမဟုတ်…။
(အရီးစိမ်းကြီးရယ်) ခွေးအငတ် မပြေတပြေတွေမှာဖြင့် ကိုက်စရာအရိုး”
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ခွေးဋီကာနှင့်ပင် ပထမရွေးလမ်းသမားတို့အတွက်က ပြည့်စုံ၍နေပြီ၊ ဤအတွက် ပြောရန်မလို…။ ထားတော့…။
ဒုတိယရွေးလမ်းက ….ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသို့ ဝင်မည်။ ပါလီမန်အတွင်းမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်။ စစ်အာဏာရှင်၏ ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မတို့အား ဖြုတ်၍ ပြင်၍၊ ဖြည့်စွက်၍… ဒီမိုကရေစီပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မများနှင့် အစားထိုးသွားကြမည်ဟု ဆို၏။
ဤတွင် …၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အပိုင်းဆီသို့ မသွားမီ … ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ရန် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖွဲ့စည်းရေးဟူသည့် …ပထမခြေလှမ်းမှ စပါမည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့၊ ရက်စွဲနှင့် နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအား၊ ဥပဒေအမှတ် ၂/၂ဝ၁ဝ အဖြစ်နှင့် ထုတ်ပြန်၏။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ အခန်း ၂ ပုဒ်မ ၆ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင်က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထား၏။ ပြီးလျှင် အခန်း ၂ ပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တွင်လည်း ပုဒ်မ ၆ ပါ အချက်များကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြော
င်း ထပ်မံ၍ ဝန်ခံကတိပြုထားခိုင်းပြန်သည်။
ဖော်ပြပါ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တို့၏ ဥပဒေအနှစ်သာရက …. ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်
မရှိ…. ယခုအတိုင်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဟူ၍ ….သက်ရောက်ပါက …. နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်မိသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ဟူသမျှသည် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား အဘိဓမ္မာသုံးပုံကဲ့သို့ ပြုပြင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့….။ လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတသိန်း စောင့်ရမည့်ဟန်….။ ထားတော့…။
ဒုတိယရွေးလမ်းအား အတွေးနှင့် ဆက်ကြည့်ပါမည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ၇၅ % ရှိပြီး စစ်သားကိုယ်စားလှယ်များက ၂၅ % ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍများအား ဖယ်ရှားရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်မည်ဆိုပါက ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပါရှိသည့် အခန်း ၁၁ အရ ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် မူကြမ်းအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ဝ % မှ ထောက်ခံ၍ အဆိုပြုတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပြုတင်ပြချက်မူကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ % အထက် ထောက်ခံမှသာလျှင် အဆိုပြုတင်ပျြချက်မူကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးမည်။ ဤတွင် ၂၅ % ပါရှိသည့် စစ်သားကိုယ်စားလှယ်များက မထောက်ခံသ၍ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဟူသည်မှာ…. မည်သို့မျှ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ ထားတော့…..။ မဆိုစကောင်း၊ ဆိုစကောင်း ….တရွေ့ရွေ့နှင့် ပါလီမန်အတွင်း လူထုကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် တိုးတက်သော လူထုလမ်းသို့ လျှောက်လိုသည့်… စစ်သားကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဤအတွက် …ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းအဆိုအား တိုးတက်သော စစ်သားကိုယ်စားလှယ်အချို့၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ၇၅ % အထက် ထောက်ခံဆန္ဒပြုမှုအား ပါလီမန်တွင် ရခဲ့ပြီ….။ ဤတွင်လည်း ဒုတိယအဆင့် အကျပ်အတည်းက ရှိနေပြန်သည်။ ပြင်ဆင်မည့် ဥပဒေမူကြမ်း၏ ပြင်ဆင်ချက်များသည် ….ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပါရှိသည့် …..
အခန်း (၂) နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
အခန်း (၃) နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ
အခန်း (၄) ဥပဒေပြုရေး
အခန်း (၅) အုပ်ချုပ်ရေး
အခန်း (၆) တရားစီရင်ရေး
အခန်း (၁၁) အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အခန်း (၁၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း ဟူသည့် အခန်းများအား ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါက …. ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ ၇၅ % အထက်၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ပြင်၍မရသေး…။ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ရဦးမည်ဖြစ်၏။ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် လူထု၏ ၅ဝ % အထက်မှ ထောက်ခံဆန္ဒပြုမှသာလျှင် …. ထိုပြင်ဆင်မှု ဥပဒေမူကြမ်းသည် အတည်ဖြစ်မည်။
ထိုအခြေအနေတွင် …. တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်အား သဘောမတူပါက …. အခန်း ၁၁ အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၄၁၈ ၊ ပုဒ်မ ခွဲ (က)၊ (ခ) တို့နှင့်အညီ … နိုင်ငံတော် အာဏာအား သိမ်းယူပိုင်ခွင့် ရှိ၏။ ဤတွင် ….ပါလီမန်ဟူသည်လည်း ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်၏။
အဆုံး၌မူ ….ပါလီမန်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အိမ်မက်သည်လည်း ပျက်လေ၏။ အိမ်မက်က အိမ်မက်အဖြစ်နှင့်ပင်..။ ဒုတိယရွေးလမ်းဟူသည်ကား…. စိတ်ကူးနှင့် ခင်းကြည့်သော လမ်းသာ…။ လက်တွေ့လျှောက်လှမ်း၍မရ…။
ဒုတိယရွေးလမ်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စံနစ်အား လျှော်ဖွတ်၍မရ…။ ထားတော့…။
တတိယရွေးလမ်းက …. ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်၏။ ပါလီမန်အတွင်း တိုက်ပွဲနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ဟု ယုံကြည်၏။
ဤတွင်…. တတိယရွေးလမ်း၌ ပထမဦးစွာ စိန်ခေါ်မှုက … ပါလီမန်ပြင်ပမှ လူထုနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများအား မည်သို့ ဆင်နွှဲမည်နည်း…။ ဒီမိုကရေစီလူဘောင်ဆီသို့ လူထုနှင့်အတူ အရှေ့မှ ဦးဆောင်၍ မည်သို့ ချီတက်ကြမည်နည်း…။
စစ်အုပ်စုမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ… နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့… ဖွဲ့စည်း၍ လူထုအား ဦးဆောင်ပြီး ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းမည်လား….။ သို့တည်းမဟုတ်… မြေအောက်အသင်းအဖွဲ့အသွင်နှင့် လူထုအား ဦးဆောင်၍ ချီမည်လား…။ ဤအခြေအနေ ၂ ရပ်၌ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဥပဒေအရ …. ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်တွင် တင်လျှောက်၍ ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါလျှင်….
ပထမဦးစွာ ရင်ဆိုင်ရမည်က …. ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည့်အကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုရမည်။
ဒုတိယရင်ဆိုင်ရမည်က ….. ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်…. စသည့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ အနည်းဆုံး ၃ နေရာတွင် ဝင်ရောက်၍ အရွေးချယ်ခံရမည်။
တတိယရင်ဆိုင်ရမည်က …. ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှစ၍ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် သေဖော်သေဘက်၊ ရဲဘော်ရဲဘက် .. စွန့်လွှတ်ဖော်၊ စွန့်လွှတ်ဘက်… ရဲဘော်များမှ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ကျခံနေကြရသည့် သူများအား လက်တွဲဖြုတ်ရမည်။ စွန့်ပယ်ထားရမည်။ မလွယ်….။ မည်သည့်နှလုံးသားနှင့် ဤရဲဘော်များအား ဖယ်ခွာသွားနိုင်မည်နည်း….။ လုံးဝ မလွယ်…။
ဤတွင် … နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းတရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး… ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းရေးက စိန်ခေါ်မှု ၃ ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ … မွန်းကြပ်စရာပင်…။
နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှု ကြီးမားခဲ့သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးရွှေအုန်းက … နအဖ ၏ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအား ကြည့်ပြီး… ဥပဒေများ မထွက်မီက ရှိခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုသည့် ဆန္ဒများပင် ပျက်ယွင်းရသည်ဟု ဆို၏။
ပြီးလျှင် … ဦးရွှေအုန်းက …
''၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဥပဒေက မကောင်းတဲ့ ဥပဒေဆိုရင် နောင်မှာလည်း ကောင်းလာနိုင်မယ့် အနေအထား မရှိဘူး။ မကောင်းလားဆိုပြီးတော့ မလုပ်ဘဲ နေလို့ရှိရင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေရတော့မှာပဲ။ ဒါကို မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာ နေပြီးတော့… လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်း အဲဒီလောက် သတ္တိမရှိဘူး” ဤအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကိုပင်လျှင် ဝင်ရပေမည်ဟု ဆို၏။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က … အင်တာဗျူးတခု၌…. “နိုင်ငံရေးပါတီတခုဟာ နိုင်ငံရေးရှိဖို့ လိုတယ်၊ နိုင်ငံရေးမရှိတဲ့ ပါတီဆိုရင် ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့၊ ခေါင်းမပါတဲ့ သတ္တဝါလို ဖြစ်မှာပဲ။ လူတွေမှာ၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နိုင်ငံရေး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပါတီမရှိလည်း အရေးမကြီးဘူး။ ကွန်မြူနစ်တို့၊ ဖဆပလတို့ဆိုရင် ဂျပန်ခေတ်တခေတ်လုံး ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ပါတီရယ်လို့ မရှိဘူး။ နောက်မှ ဖဆပလဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်'' ဤသို့ ပြောဆို၏။
ဆရာဦးဝင်းတင် ဥပမာပြုညွှန်းဆိုသည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဖဆပလ ဟူသည်ကား…. ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရန် လူထုစည်းရုံးရေးအား မြေအောက်ဆင်း၍ လုပ်ဆောင်နေသည့် သခင်စိုး ဦးဆောင်သည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဖဆပလ တပ်ပေါင်းစုအား ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးဖြင့် … ဖက်ဆစ်ဝါဒအား လက်နက်ကိုင် တိုက်ထုတ်ခဲ့သည့် သမိုင်းအား ဥပမာပြုညွှန်ပြခြင်းဟု နားလည်ရ၏။
ဤတွင် ….တတိယရွေးလမ်း ဟူသည်ကား…. လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသို့ ချီရာလမ်း….။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/20100အကြံပြုခြင်း
My Burma, My Voice: Waihnin's Story
31 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/ovienxa31 March2010 Yeyintnge Diary
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း
NLD Shwegonetaing Declaration (Page 1)
NLD Shwegonetaing Declaration (Page 2)
NLD Shwegonetaing Declaration (Page 3)
Statement on NLD's decision of the 10 alliances
ENC Annual Meeting Statement
http://ifile.it/0z4vghjENC Annual Meeting Statement
G8 Foreign Ministers Meeting Canadian Chair's Statement
Canadian Chair’s Statement
Voice Of Burma No. 754, MARCH 28, 2010
http://ifile.it/8bvt4ksABFSU-FAC Statement No 1-2010 on NLD_s Decision
NLD ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် ... ၃၀.၃.၂၀၁၀
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ခွေးဋီကာနှင့်ပင် ပထမရေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာ...
G8 Foreign Ministers Meeting Canadian Chair's Stat...